NgoMlilo kunye naMadangatye yiDragonForce - Okunye
NgoMlilo kunye naMadangatye yiDragonForce
Njengamazwi amaninzi e-DragonForce, ezi zichanekileyo, kodwa zinentsingiselo enzulu. Uluvo olusisiseko kukucebisa ngokuhlala emfazweni omkhulu. 'Kude lee' ngumgca ocebisa ukuba idabi lenzeka kwilizwe eliyintsomi. Isandi sekatala kunye nokungenelela okude kakhulu kuthetha ukuba umlo mde kwaye ubonakalisa ubungqongqo obukhulu. 'Siva iintlungu zobomi obulahlekileyo' zibonisa ukuba balilela amajoni awileyo awalwelayo.
Ingoma inezinto ezimbini ezikhawulezayo ezenziwa yicir-solo nguHerman Li noSam Totman. Ngexesha lokurekhodwa kwengoma, u-Herman Li owayeyisiginkci waqhawula enye yeentambo zakhe zegitare. Ngaphandle koku, eli qela lagqiba kwelokuba ligcine le rekhodi kwaye liyishiye kwinguqulelo yokugqibela ye-albhamu.
Le ngoma ibonisiwe kwisandi somdlalo wevidiyo odumileyo Guitar Hero III kwaye ivuleke kuphela ngokugcwalisa imo yomsebenzi. Ithathelwa ingqalelo njengengoma yokugqibela, kwaye kunye 'neJordani' nguBuckethead, eyona ngoma inzima ukuyidlala.
Kwakungekho ngoJanuwari 2008 ukuba inzala evela Guitar Hero III , kukhokele le ngoma itshata kwibhodi engatshatanga yeBillboard Pop, ingoma yokuqala ye-Dragonforce yokwenza njalo e-US.
Imvumi ekhokelayo ZP Usongelo kunye noGuitarist uSam Totman ubhale le ngoma.
Isiqalo sokuqala kwingoma siqhele ukuphazanyiswa yigitare, ikakhulu kuba ibandakanyiwe kwinxalenye edlalwayo Guitar Hero 3 , kodwa i-riff yayidlalwe ngokwenyani kwi-synthesizer / keyboard.
Ibhendi ayilindelanga kakhulu kule ngoma xa beyirekhoda. Sasifana nje, 'Oo, yenye ingoma enje,' utshilo uSam Totman ngo-2014. 'Kwaye andikacingi ukuba ibhetele kunayo nayiphi na enye into yethu.'
Inkqubo ye- Guitar Hero Ingoma yale ngoma iqulethe amanqaku angama-3722. Ingoma eyiyo inezinye.
wakhe wazi ukuba uligorha lam
Ingoma inamathele embindini nawe
sayina uphawu kuyo yonke indawo ingoma yomqondiso
Ukholelwa ukuba ngumculi omnye mr mr grinch
patrick swayze - ufana nomoya
yintoni le ngoma unqwenela ukuba ubulapha
Ungumfazi endihlala ndiphupha ngaye